Twitter inosimbisa kuti Donald Trump haazodzokere pasocial network, zvisinei nezvenzvimbo yezvematongerwo enyika yaanotora mune remangwana | Linux Vakapindwa muropa
Donald Trump (aimbova purezidhendi weAmerica) akapedzisira arambidzwa kubva kuTwitter kwehupenyu hwese, kubvira pakutanga mwedzi wapfuura, aimbova mutungamiriri wenyika ndiye akatanga kumiswa kwenguva yevhiki imwechete uye gare gare sarudzo yavakaita yakaziviswa kwete chete paTwitter asiwo pane mamwe magariro uye akasiyana maratidziro. mapuratifomu pakumiswa kweTrum accountp.
Gare gare nhau dzakaburitswa mukati mekubvunzurudzwa neveUS media CNBC naNed Segal, CFO yeTwitter yakati panguva yekuchinjana kuti: kana mushandisi, chero hunhu hwavo kana zita, achibviswa papuratifomu, vanogara zvakadaro nekusingaperi. Izvi zvinosimbisa kuti VaDonald Trump, vakabviswa paTwitter musi waNdira 8, vacharamba vachidaro kweupenyu hwese, kunyangwe dai vakasarudzika semutungamiriri weUnited States muna2024.
Twitter's CFO, Ned Segal, akasimbisa kuti kubviswa kwaDonald Trump pachikuva ndekwechigarire, kunyangwe kana vaimbove mutungamiri wenyika vafunga kukwikwazve kuhofisi yeruzhinji. Muhurukuro naBecky Quick, CNBC's "Squawk Box," Segal akati hapana munhu "anokurudzira mhirizhonga" paTwitter haazokwanisa kudzoka. Akaenderera mberi achiti VaTrump "vakabviswa pachigaro pavakange vari mutungamiriri wenyika, uye hazvaizoita musiyano kune chero ani zvake ari mukuru wehurumende kana abviswa pabasa."
"Mashandiro emitemo yedu, pavanokubvisa papuratifomu, vanokubvisa pachikuva," akadaro Segal. "Kunyangwe iwe uri muongorori, CFO kana aimbove kana mushandi wehurumende, rangarirai kuti mazano edu akagadzirirwa kuona kuti vanhu havamutse mhirizhonga, uye kana mumwe munhu akadaro, tinofanirwa kuvabvisa pabasa uye mirawo yedu haibvumidze vanhu dzoka ".
Uye ndeyekuti panguva yake muWhite House, Donald Trump akashandisa Twitter kuti vataure kakawanda kupfuura iye akamutangira Barack Obama. Pakati pehasha tweets, komedhi uye sarudzo dzezvematongerwo enyika, mutungamiri wenyika anga ajaira kuzivisa zvese zviri papeji rake reTwitter Uye kunyangwe kana mamwe meseji yake dzimwe nguva anga asinganyatsoenderana nemitemo yepuratifomu, mutungamiri wenyika akanakidzwa nechengetedzo yekutaura akasununguka. Muchokwadi, panguva yehutungamiriri hwake, VaTrump vaizivikanwa nenzira yekumanikidza tweeter.
Somuenzaniso, Muna Chivabvu 2020, Twitter yakaramba imwe yetweets yaTrump nekuti akatyora mumwe wemitemo yayo -mire-refu iyo inorambidza kukudzwa kwechisimba. Kutevera kuratidzira kukuru muUnited States zvichitevera kuurayiwa kwaGeorge Floyd, mutungamiri wenyika akatyisidzira "kutumira muNational Guard" uye akawedzera yambiro yekuti "kana kupamba kwacho kuchizotanga, kupfura kuchatanga."
Nezve yakajairika account, izvi zvaizoguma nekumiswaAsi Twitter yakaita musiyano, chimwe chekupembedzwa kweTwitter chekuchengeta tweet yaTrump nekuiviga, pane kuimisa zvachose, yaive yekuti Mutungamiriri weUnited States aive munhu "ane nhau", kune avo vakasarudzika. VaTrump vakatsanangurazve zvematongerwo enyika vachishandisa Twitter kupfuura nzira dzepamutemo nemagariro enhau.
Nekudaro, mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika musi waNovember 3, 2020, VaTrump vakashandisawo vezvenhau kukwikwidza zvakabuda, kubva kuziviswa kwemhedzisiro kusvika paakabva kuWhite House, VaTrump havana kumbobvuma kukundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika dzaNovember wadarika. Akataura kwenguva yakareba kuti vhoti yakanga yabiwa uye akabvunza vateveri vake kuburikidza neTwitter kuti varatidze kumonyororwa kwavanoti vakatambudzwa.
Kushatirwa kubva kunaDonald Trump nevatsigiri vake kwakatungamira mhirizhonga kuCapitol musi wa6 Ndira 2021 uye kunyangwe kutora chikamu chaicho kwevaimbove mutungamiri wenyika kusati kwaratidzirwa, Twitter yakawana iyi mameseji kunge anotsamwisa, kumanikidza vateveri vake kuti vapinde muCapitol. Nekuda kweizvozvo, Trump akabviswa pachikuva muna Ndira 8, 2021.
Mukumhanyisa kurambidzwa, pasocial network yaigara yakafukidza tweets dzinotsausa uye dzine hukasha kubva kunaTrump iyo yaityora mutemo wake nechiratidzo chekunyevera icho chaisanganisira chinongedzo kune rumwe ruzivo kana mamiriro.
Mashoko aSegal anouya apo Congress inoshanda pachiitiko chekutongwa kwechipiri chakanangana naTrump, mutungamiri weU.SA chete akamhan'arirwa kaviri. Kana Seneti ikakuwana uine mhosva (izvo zviri kure nechokwadi), saka Imba inogona zvakare kuvhota kukurambidza kubata hofisi yeruzhinji mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Twitter inosimbisa kuti Donald Trump haazodzokere pasocial network, zvisinei nezvenzvimbo yezvematongerwo enyika yaanotora mune ramangwana
Ini handisi kuzomusuwa, yake twitter yaive jee
Hazvireve kuti ini ndine hanya zvikuru nemapato evaAmerican uye kudzvinyirirwa kwevagari vemo asi muchiitiko chisingaite kuti Trump amire musarudzo kana kupa mumwe munhu anomutsiva uye akunde ... ndinotya kuti uyu Dorsey achave nezvakawanda pane zvikonzero zvakakwana kuti usarara zvakanaka. Pamwe ndakakanganisa kana chinhu chekutanga chichaitwa naTrump kuenda kwaari, kweAmazon, yeGoogle, yeApple, ... Payday.
Pindura kuna Lucho
Haisi yekudzivirira Trump yakasununguka kutaura pane mamwe mapuratifomu
Filmulator: inonakidza kwazvo mbishi mufananidzo mupepeti (RAW)